Qalbi Wanaagga Iyo Waddan Jeceylka Shacabka Reer Somaliland Iyo Gurracnaanta Garashada Siyaasigooda
(Hadhwanaagnews) Friday, January 12, 2018 08:12:05
Sababta rasmiga ah ee ka dambaysa in guud ahaan dadka reer Somaliland Danjireyaal (Ambassadors) noqdaan Alle ayaa og.
Hasa yeeshee, male-gorfeyntayda sababaysan ayaan jecelaystay in aan bartan idin ku la wadaago. Had iyo jeer waxa jirta in shacabka reer Somaliland meel kasta oo ay dunida kaga nool yihiin dedaal siyaasi ah ay kaga jiraan, maal,muruq iyo maskax ba way la garab taagan yihiin waddankooda, si ka duwan cid kasta oo kale.
Ardayda jaamacadaha dunida wax ka barta ee reer Somaliland waxa ay iyaga oo xaalado adag ku jira ay halkooda ku xusaan maalmaha xusaska Qaran. Sidoo kale, waxa ay Iyana dedaal aan yarayn oo
waddiniyaddeed muujiya qurba-joogta reer Somaliland ee dunida dacalladeeda ku filiqsan.
Warbaahinta muwaadiniinta reer Somaliland gacmahooda ku jirta iyo kuwa ay sida dadban saamaynta ugu leeyihiin ba waxa ay ugu adeegaan waddankooda iyaga oo shaqada ugu yar ee ay waddanka ugu qabtaan tahay in ay gol-daloolooyinka ciddii Somaliland neceb raadiyaan oo baahiyaan. Intaas oo dhan xuskooda waxa aan uga socday haddii dad shacab ah oo aan siyaasiyiin ahayni damcaan in ka shaqeeyay arrimo siyaasi ah oo ay filayaan in ay sumcadda waddanka sare u qaadi karto. Waxa dhacda in xilliyada qaar dadkaasi turaan-turooyin diblamaasiyaddeed ay waddanka u keenaan, inta badanna ficilladoodu maaha kuwo aqoon ku dhisan ee waa kuwo qalbi wanaag ku dhisan.
Siyaasadda arrimaha debedda ee Somaliland na inta badan waxa ay ku tamarisaa awoodda faraha badan ee dadkaa ku jirta iyo qalbi wanaaggooda. Walow aan filayo in aan xooggaasi sidii ay ahayd aan looga faa'iidaysan.